Ifulegi le-backpack & sign
uphawu & ifulegi
Ihlukile kweyakudala yethuUbhaka SFH, sihambisa ukukhwezwa kwefulegi lefulegi le-Backpack futhi sisayine ngaphakathi kwekhompathimenti enoziphu bese sishiya iphaneli elingemuva liyisicaba.
Isigxobo sefulegi siklanywe njengenhlanganisela evumelana nezimo yezinketho zefulegi ezinhlanu ohlelweni olulodwa, ubhaka ofanayo nesigxobo sefulegi esifanayo singafanelana nezimo ezi-5 ezidumile (ifulegi lezimpaphe, ifulegi le- teaardrop kanye nefulegi elingunxande, ifulegi le-arch, ifulegi lokugwedla)
Indawo enkulu ngemuva, ikuvumela ukuthi unamathisele iphosta kuyo, ukuze kokubili ifulegi nephosta enkulu kuzodonsa amehlo, kukusize ukuthi uhlole ibhizinisi okungenzeka ukuthi likhona.
Ngemifanekiso yangokwezifiso yefulegi nephosta ongayishintsha kalula usuke emcimbini owodwa uye komunye, ifulegi le-Backpack & sign ingelinye lamathuluzi angabizi kakhulu okuphromotha ukuhamba ngaphakathi endlini noma ngaphandle.
(1) Idizayini yokufaka ifulegi emisha.Iqalwe iklanywe ngabakwa-WZRODS emhlabeni wonke
(2) Ubhaka owodwa kanye nesethi yesudi yezigxobo zamafulege amajamo angu-5, kulula ukuwashintsha futhi ulawule isitoko sakho ukuze uhlangabezane nokuhleleka okuphuthumayo kwamakhasimende, unciphise i-inventory yakho nesikhala sesitoko.
(4) Ikhompathimenti enoziphu inikeza isikhala esengeziwe sokukhulula izandla zakho.Iphakethe elide elenzelwe ukugcina isigxobo
(6) anezikhala amaphakethe aseceleni /amahhuku amabhodlela amanzi
Ikhodi yento Umkhiqizo Usayizi Wokuphrinta Isisindo usayizi wokupakisha
BBXDNOA F/S/U Ifulegi 122*51CM 1.2KG 54*30.5*5.5CM
Thola okwengeziwe wethuIsibhengezo sikabhakanoma okunyeifulege&isibonisi sokuma
Okwedlule: 2 ku-1 endlini
Olandelayo: I-Deluxe Backpack X-shape Banner